China Pressure Inonzwisisika Seal Liner fekitari uye bhizimisi | 品牌 名 / 公司 名
Pressure anonzwisisa Seal Liner
Iyo liner inoumbwa nefuro zvinhu zvakapomberedzwa nehupamhi hwemhepo inofefetera. Iyi liner inonzi zvakare imwechete-chidimbu liner. Inopa chisimbiso chakasimba pamwe nekunamatira kumudziyo nekumanikidza chete. Pasina chero chisimbiso uye kudziyisa zvishandiso. senge inopisa inopisa inonamira induction chisimbiso liner, inowanikwa kune ese marudzi emidziyo: mapurasitiki, girazi nesimbi midziyo. Asi haina kugadzirirwa zvinhu zvinodzivirira, mhedzisiro yacho ishoma pane yekutanga, saka zvinokurudzirwa kuti ushandise zvinhu zvine hupfu, senge chikafu, zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano.
Pressure-Kunzwisisa Seal Liner
Pressure inonzwisisika Seal chidimbu chimwe, chigadzirwa chinogadziriswa. Inosanganisira furo polystyrene yakaputirwa kune rimwe divi nekumanikidza kunamatira. Iyo liner inogona kusimbisa iyo mudziyo mushure mehombodo kapu yadzvanywa zvine simba.
Yakaumbwa zvakafanana neyefuro liner, yekumanikidza inonamira liners ine kunamatira kune rumwe rutivi, yakagadzirirwa kunamatira kune iwo mupendero wemudziyo. Kana mudziyo ukavharwa uye kumanikidzwa kunoiswa pane chivharo (uyezve, iyo liner), inonamira inoitwa, iyo inogadzira chisimbiso.
Dzvinyiriro dzinobata liners dzinopa imwe nhanho yekudzivirira mukuti inonyatso gadzira chisimbiso chinonamira pamupendero webhodhoro. Dhinda rekumanikidza harifungidzirwe senzira yekukanganisa chisimbiso chiri pachena. Izvo hazvishande zvakanaka nezvinwiwa, kunyanya mafuta. Ivo vanokwanisa, pane dzimwe nguva, kushanda nezvakakora zvinwiwa zvakadai semafuta uye sauces.
Raw zvinhu: PS Fomu + Pressure-Inonzwisisa Adhesive
Simbiso Rukoko: PS
Hurefu Ukobvu: 0.5-2.5mm
Isu tinobvuma yakagadzirirwa saizi & kurongedza
Kuisa chisimbiso pasina michina.
2.Dry chikafu / hupfu
Rakananga kumanikidzwa kwekuisa chisimbiso pamusoro: iro rakajairwa simba pane yeyuniti inosangana pamusoro pakati pekuisa chisimbiso nzvimbo inonzi kunamatira kumanikidzwa. Iko kusimba kwekumanikidza kwepamusoro chinhu chakakosha kukanganisa iko kuita kwekusimbisa kwe gasket kana kurongedza. Kazhinji, kumwe kumanikidzwa kunogadzirwa pane yekuisa chisimbiso pamusoro nekushandisa iyo yekutanga kuomesa simba, iyo inoita kuti chisimbiso chisimike, kuitira kuti kuderedze kana kubvisa mukaha uripakati pechisimbiso nzvimbo dzekusangana uye kudzivirira iro mvura kuti isapfuure, kuti uwane chinangwa chekuisa chisimbiso. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti mhedzisiro yemvura yekumanikidza inochinja iyo chaiyo kumanikidzwa kwekuisa chisimbiso pamusoro. Iko kuwedzera kweiyo chaiyo kumanikidzwa kwenzvimbo yekuisa mucherechedzo kunobatsira pakuisa chisimbiso, asi inogumirwa nesimba rekuwedzera kwesimbi yekuisa chisimbiso; Yechisimba chine simba, iko kuwedzera kweiyo chaiyo kumanikidzwa kwenzvimbo yekuisa chisimbiso kunokonzeresawo inoenderana nekuwedzera kwekukonana kusagadzikana.
Pashure: Glue Seal
Zvadaro: Furo Liner